Paikadin’i Trump amin’i Afghanistan: Fanantenana Vaovao sy Tahotra Tranainy · Global Voices teny Malagasy
Paikadin'i Trump amin'i Afghanistan: Fanantenana Vaovao sy Tahotra Tranainy
Voadika ny 10 Septambra 2017 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, русский, فارسی, English
Manamboninahitra US mitana ampembam-boaloboka ao Afghanistan. Sarin'i Pentagon. Creative commons.
Taorian'ny volana vitsivitsy nanginana, dia nanambara ny paikadiny amin'i Afghanistan nandritra ny kabariny naharitra adiny iray tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Donald Trump tamin'ny 21 aogositra. Ho an'ny olompirenena izay mahita ny herisetran'ny mpitolona mitam-piadiana mihamafy kokoa hatrany arakaraka ny fialan'ny vondro-tafik'i Etazonia,dia misy ny zavatra maromaro tsara tazonina amin'izany kabary izany.
Voalohany, tsy tahaka ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakan'i Obama mifototra amin'ny fametrahana fotoana farany, ny paikady miaramila vaovao “arakaraka ny” dia mamela ny mpitari-tafika US any Afghanistan halalaka amin'ny fanapahan-kevitra arakaraka ny toe-javamisy eny an-kianja. Betsaka ny mandika izany paikadin'i Trump izany ho fizàrana manasa tanana satria ireo jeneralin'ny Filoha no hizaka ny tsiny raha vao misy ny tsy mety.
Izany koa, araka ny nomarihan'ny Sekreteram-Panjakana Rex Tillerson nandritra ny valan-dresaka fohy ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 22 Aogositra, dia miaraka amin'ny diplaomasian'ny “arakaraka ny” izay sady manery ny governemanta Afghan manafaingana ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitantana no manery an'i Pakistan hampitsahatra ny fampiatranoana vondrona mpampihorohoro.
Tsy hafa amin'ny paikadin'i Obama amin'ny vondro-tafika US ao Afghanistan taorian'ny taona 2014 izay raha tononina dia ny fanazaran-tena, fanoloran-kevitra ary ny fanatevenan-daharana (fanampiana) ny vondro-tafika Afghan ny fitsipi-pirotsahan'ny tafika amin'izany, natao izany hahavitsy araka izay tratra ny famoizana miaramila US izay mety hitondra poizina ara-politika rehefa mody any Etazonia.
Ny zavatra ho voamarika indrindra amin'ny firotsahana ara-tafik'i Etazonia angamba dia ny “petrakevitra araka ny zavamisy” hifantoka bebe kokoa amin'ny ady amin'ny “fampihorohoroana” fa tsy amin'ny “fananganana firenena” sy ny fametrahana demaokrasia, hoy i Trump.
Izany paikady izany dia mifanaraka amin'ny laharam-pahamehan'ny Trano Fotsy manao ho vaindohan-draharaha kokoa ny tombontsoa ara-toekarena manoloana izay mety ho tombondahiny ara-politika. Nandritra ny antso an-telefonina voalohany nifanaovany rehefa nandray ny fahefana, ohatra, i Trump, dia nampifanarahan'ny Filoha Ashraf Ghani amin'ny fiovam-peo ny tsindrom-paingotra nataony hanaitra ilay mpanankaremben'ny fananana mifaka (trano sy tany) ho liana amin'ny harena ambanin'ny tany milevina ao Afghanistan.
Paikadin'i Trump: Iza no Nilaza Inona?
Araka ny nantenaina dia noraisin'ny manampahefanan'i Afghanistan tsara ny paikadin'i Trump, amin'ny tsikeran'i Washington manoloana an'i Pakistan mpifanolo-bodirindrina aminy izay niteraka fiderana.
Nilaza ny filoha Ghani tamin'ny valandresaka tamin'ny 23 aogositra, fa manavotra ny tombontsoan'i “Afghanistan sy i Etazonia” ilay paikady. Iray andro mialoha izany no nideran'ny Filoha Tale Jeneraly (CEO) Abdullah Abdullah ny paikady ho fanavaozana indray ny fanoloran-tenan'i Etazonia amin'i Afghanistan sy ny vahoaka Afghan.
Nankasitrahan'ny mpiasam-panjakana teo aloha ihany koa ny paikady.
Naneho hevitra tamin'ilay paikady tao amin'ny sioka iray i Rahmatullah Nabil, izay lehiben'ny sampam-pitsikilovana tamin'ny nitondran'i filoha teo aloha Hamid Karzai :
1/2 ) Tohananay ny paikadin'i Etazonia mirotsaka hanohana ny vahoaka AFG, manohy amin'ny fanohanana ny ANSDF ary manandra-peo sy mazava amin'izany…
Misaotra ny governemantan'i Etazonia amin'ny fangaraharany ny teo alohany Amrullah Saleh:
Ry governemanta US hajaina, mankasitraka amin'ny fiantsoana ny kary ho kary. Tsy maintsy atsahatra ny fanohanana mavitrika ataon'i Pakistan amin'ny horohoro. Tsy maintsy masaka amin'ny fahazavana ny fahefana masaka.
Manome akony amin'izany i Parwiz Kawa, Afghan iray mpanao gazety:
Nataon'ny filoha Trump mazava ihany tamin'ny farany izay efa nolazain'ny Afghan tao anatin'ny 15 taona : mampiantrano mpampihorohoro i Pakistan.
Raha nihiakam-pifaliana i Mustafa Ali Jamal, mpisera Facebook:
Izany indrindra no antony nitiavako an'i Trump nandritra ny fifidianana sy nanomboka tamin'izany fotoana izany. Nanambara paikady mazava tsara, maharaka ny zavamisy, ary be mpangataka ho an'i Afghanistan izy. Miandry ny fanatanterahana izany izao!
Tsy faly loatra amin'izany kosa anefa ny setriny avy amin'ny sehatra iraisampirenena, manomboka amin'i Shahid Khaqan Abbasi, Praiminisitra Pakistaney mampitandrina fa tsy ho vitavita mora izany fomba fitenin'i Trump izany ho an'i Pakistan, raha miara-manohitra izany i Rosia, Shina ary i Iran.
Ankoatra izany, na dia eo aza ny fankatoavan'ny lehiben'ny sampam-pitsikilovany, dia nanohitra ilay paikady vaovao i Karzai, mpitarika teo aloha, amin'ny filazana fa “mifanohitra amin'ny fandriampahalemana sy ny tombontsoam-pirenen'i Afghanistan” izany. Nilaza ny mpitondratenin'ny Taliban iray fa “manimba ny ain'ny miaramila Amerikana” i Trump.
Misy ny fisalasalana lehibe fa toa tsy ho ampy hampihemotra an'i Pakistan amin'ny fanohanana ny Taliban sy ireo vondrona mitam-piadiana hafa amin'ny fikasana hametra ny tara-pahazavana (herim-panintonana) Indiana izao paikady vaovao izao. Mifanolotra sisintany amin'i Pakistan sy i India moa i Afghanistan. Mihoatra ny 24.000 kilaometatra ny sisintany ifanoloran'i Pakistan amin'i Afghanistan ary tena kilavadavaka be igorobahana mihitsy.
Nanoratra tao amin'ny Facebook i Ali Amiri, mpampianatra amin'ny oniversite iray tsy miankina ao Kabul:
Paikady tsara ho an'i Afghanistan ny iray miteraka fahatezeran'i Pakistan…
Raha manohitra ny fifanosehana ifanaovan'ireo manana hery manoloana an'i Afghanistan eo amin'ny sehatra iraisampirenena kosai Waheed Omar, ambasadaoron'i Afghanistan ao Italia :
Paikadin'i Etazonia. Misy firenena vitsivitsy mahatsiaro ho voahilika sy voatosika. Mizaka ny vokatry ny lonilonin-dry zareo ity zaza iray tsy manantsiny tao amin'ny moskean'i Kabul ity. Mahamenatra !
Mitondra ny lafiny maha-mampidi-doza azy ny fanapahan-kevitr'i Trump hanondro an'i Pakistan ho firenena mampiantrano mampihorohoro. Tahaka izany ihany koa ny paikady mangarahara manoloana an'i India hanolo tsikelikely an'i Washington amin'ny maha-mpanohana voalohany indrindra an'i Afghanistan, andraikitra izay hita ho tsy niomanan'i New Delhi horaisina amin'izao fotoana izao.
Fa ho an'i Trump aloha mazava loatra dia tsy problemany loatra izany olana izany.